Kevin De Bruyne Oo Saxeexiisa Barcelona Loo Bandhigay Kaddib Ganaaxa Man City & Jawaabta Xasaasiga Ah Ee Ay Barca Bixisay - Gool24.Net
05/05/2020 Apdihakem Omer Adem
Wargeyska ree Spain ee Mundo Deportivo ayaa shaaca ka qaaday warbixin cusub oo xiisaheeda wadata isagoo shaaca ka qaaday sida kooxda dalkaas ee Barcelona loogu bandhigay saxeexa kubad sameeyaha Manchester City ee Kevin de Bruyne.
Dhawaan ayay ahayd markii City ganaax laba sano ah ay xidhiidhka qaarada Yurub ee UEFA ka saareen tartamada qaaradaas taas oo hawada galisay mustaqbalka qaar kamida xiddigaha ugu waaweyn kooxdaas.
Iyadoo hore ay saxaafadu warar kala duwan uga qoreysay mustaqbalka De Bruyne kaddib ganaaxaas, ayuu 28 sano jirkan qudhiisu dhawaan si cad u sheegay inuu ka fikirayo inuu kooxda iskaga tago haddii ganaaxa laga qaadi waayo.
Dabcan ma aysan ahayn wax xiiso badan in ganaax gadhka loo geliyay City walow la filanayo in tababare Pep Guardiola uu kalsooni ku qabi doono ka go’naanshaha xiddigaha kooxdiisa.
Si kastaba, qaar kamida ciyaartoyda kooxda ayaan filanayn inay ka maqnaadaan laba sano tartanka ugu xiisaha badan Yurub waxaana hoggaaminaya Kevin oo dhawaan saxaafada u sheegay “Laba sano oo ciyaaraha Yurub la’aantood ahi waxay noqon doonaan kuwo aad u dheer”
De Bruyne ayaa ku jira da’diisii ugu fiicnayd waxaana uu kusii jihaysanayaa sanadaha dambe ee xirfadiisa ciyaareed maadaama oo uu bisha dambe 29 sano jir noqon doono.
Xaalad kastaba, KDB ayay jiraan kooxo xiiso u muujinaya inay ka kaxaystaan Sky Blues, sida uu sheegayo Mundo Deportivo Barcelona ayaa ah kooxda loo bandhigay fursada ay kula wareegayso xiddigan.
Wargeyska ayaa sheegay in Barca ay suurogal ahaan lahayd inay fursadaas ka faai’daysato laakiin ay u aragto mid aan macquul ahayn xagaagan.
Sababta ugu weyn ee aysan ula wareegi karin De Bruyne ayaa ah inuu dhaqaale xumo keenay xanuunka Coronavirus sidoo kalena uu bartilmaameedka koowaad ee Barca yahay Lautaro Martinez oo Inter Milan ka tirsan.